Ny maody maizina dia tonga amin'ny iPhone sy ny telefaona Android anao, ny fomba fampandehanana azy | Vaovao momba ny gadget
Ny maody maizina dia tonga amin'ny iPhone sy ny telefaona Android anao, ny fomba hampiasana azy
Manana izany ihany isika amin'ny farany maody maody tonga tao amin'ny WhatsApp ho an'ny iOS sy Android. Noho ny fanavaozana farany azo alaina ho an'ny rafitra roa dia ovao ny interface mba hifanaraka amin'ny lohahevitra nofidina, na maizina na mazava. Fampisehoana iray izay efa beta nandritra ny fotoana kelikely ary mpampiasa maro no dodona ny hahita ny farany.
Ny fangatahana toy ny Telegram dia efa niaraka tamin'ity maody ity efa ela, WhatsApp dia nangataka, zavatra izay tsy azontsika loatra satria izy io dia iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra eran'izao tontolo izao, tsy lazaina intsony. Ny maody maizina dia nampiharina tamin'ny rafitra roa nandritra ny 6 volanaNa ireo rindrambaiko malaza hafa toa ny Instagram aza dia tao anaty maody tsy voavaha nandritra ny herinandro maro.
Tamin'ny volana Mey tamin'ny taon-dasa raha nanomboka nahita maizina maody tamin'ny Android izahay ary nandritra ny famelabelarana iOS 13 tamin'ny taon-dasa dia nanambara i Apple fa maody maizina ho fanatsarana ny mason'ireo mpampiasa amin'ny hazavana ambany. Marina izany raha ny hevitro, satria indrindra rehefa eo am-pandriana isika ary nampiasa ny terminal dia afaka manelingelina ny mpiara-miasa amintsika, ankehitriny dia niova ny fomba maody maizina, ary raha manana ny maody alina ihany koa isika dia ho tonga lafatra ny fahitana. ary hankasitraka izany ny masontsika sy ny mpiara-miasa amintsika.
1 Ahoana ity maody maizina ity ao amin'ny WhatsApp
2 Ahoana ny fomba hampiasana azy ho an'ny iOS
3 Ahoana ny fampiasana azy io amin'ny Android
Ahoana ity maody maizina ity ao amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia tsy fampiharana velively izay misongadina amin'ny famolavolana azy, na dia mampiavaka azy hatrany ny minimalism, tsy miova amin'ny maody maizina vaovao azy io. Mamela antsika hisafidy fotsiny ny lohahevitra maizina na ny lohahevitra maivana. Faritra somary maivana na saika fotsy izao dia miloko fotsy sy mainty. Miharihary fa fotsy na fotsy ny soratra fa tsy mainty ary amin'ny faritra manokana toy ny fampitandremana fa voahidy ny resaka dia loko volamena ny soratra. Amin'ny maody mazava, mainty eo amin'ny bolongana volamena ireo bitsika ireo. Niova ihany koa ireo bubble nipoitra avy amin'ny hafatra, ny an'ny mpandefa dia maitso maizina ary ny an'ny mpandray dia feo volondavenona.
Ahoana ny fomba hampiasana azy ho an'ny iOS
Mba hananana io maizina io amin'ny iPhone dia ilaina ny manavao ny fampiharana amin'ny kinova farany. azonao atao misintona avy amin'ny App Store. Etsy ankilany, tena ilaina ny fananantsika ny iPhone nohavaozina ho iOS 13, satria eto izy io dia nampidirin'i Apple ny maody maizina andrasana amin'ny interface-ny.
Miaraka amin'ny fampiharana nohavaozina amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 13, ny sisa ataonao mba hampiasana ny maizina maody ao amin'ny WhatsApp dia ny mampandeha azy amin'ny iOS, izany hoe, mampihetsika azy avy amin'ny fikirakirana ny rafitra iPhone ao amin'ny fizarana efijery. Izy io koa dia azo ahetsika amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana Control Center na mandeha ho azy raha toa ka efa namboarinao. arakaraka ny ora na toeran'ny masoandro. Hiseho ho azy ny WhatsApp rehefa navelantsika namboarina ary tamin'ity fomba ity dia hampifangaroina tanteraka toa ny App natiora izy io.
Ahoana ny fampiasana azy io amin'ny Android
Ao amin'ny Android dia mitovy ny dingana, amin'ny Android 10 maody maizina azo ampifanarahana amin'ny maody amin'ny rafitra ka miova ho azy. Azo atao koa ny misafidy maody maody na maody maizina. Tokony hanana ny kinova farany an'ny WhatsApp ho an'ny Android nametraka.
Mba hanovana ny maody interface, mandehana any amin'ny setting ary safidio ny 'Chats'. Ao anatin'ity fizarana ity amin'ny 'Theme' no ahitantsika ny safidin'ny 'Mazava' (hazavana) sy 'Maizina'. Tsindrio fotsiny ny 'OK' hanamafisana ny maody voafidy. Amin'ny terminal sasany dia afaka nahita izahay fa tsy misy ny maody maizin'ny WhatsApp Miaraka amin'ny fampiharana nohavaozina, misy safidy maromaro momba an'io. Ny fanavaozana ny maody maizina dia mbola tsy tonga amin'ny terminal anao, indraindray ny fanavaozana dia ahodina amin'ny fomba mihodinkodina. Ny safidy faharoa dia ny mbola fitsapana ny Facebook ka noho izany dia manome an-tsokosoko ny safidy ho an'ny mpampiasa sasany. Amin'ireo tranga roa ireo dia ny miandry ihany no tokony hatao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny maody maizina dia tonga amin'ny iPhone sy ny telefaona Android anao, ny fomba hampiasana azy
Disney +, izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohany
Ny tetika tsara indrindra ho an'ny Word